लमजुङको मस्र्याङ्दीमा सिर्जना कप तथा माघेसंक्रान्ति मेला २०७८ सुरु - पिटि अनलाईन न्यूज
लमजुङको मस्र्याङ्दीमा सिर्जना कप तथा माघेसंक्रान्ति मेला २०७८ सुरु
२८ पुष, २०७८ ०८:२२
मस्र्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. ६ ठूलीबेंसीमा २६ औं सिर्जना कप तथा माघेसंक्रान्ति मेला २०७८ सुरु भएको छ । मेलाको मंगलबार नेकपा एमले केन्द्रीय सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य जमिन्द्रमान घलेले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सविधान सभा सदस्य घलेले खेलले युवायुवतीको प्रतिभालाई उजागार गर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्यका लागि खेलकुद आवश्यक भएकाले फुटवल तथा अन्य खेललाई अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गाउँगाउँमा रहेका तथा खेलमा रुची भएका युवालाई खेलमा अघि बढाएर गाउँ, पालिका, जिल्लाबाट राष्ट्रका लागि सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
खेलकुदको विकासका लागि पालिका तथा जिल्लाले समयसमयमा विभिन्न खेलको आयोजना गरिराख्नुपर्ने बताउनुभयो । कोरोनाको जोखिम कायम नै रहेकोले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर खेल तथा मेला सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको ।
कार्यक्रममा मस्र्याङदी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, वडा नं. ६ का अध्यक्ष लिलाप्रसाद घले, वडा नं. ७ का अध्यक्ष युव घले, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर घले, लगायतले युवालाई खेलमा रुचि बढाउन तथा दक्ष खेलाडी उत्पादनका लागि खेलकुदलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मगंगलबार सिर्जना युवा क्लवका ३० बर्ष माथिका र १६ बर्ष मूनिका बीचमा मैत्रीपूर्ण खेल सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रम आयोजक सिर्जना युवा क्लवका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा क्लवका पूर्वसचिव ईन्द्रसिह अधिकारीले उपस्थितिलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव करण थापाले गर्नुभएको थियो । प्रतियोगिता ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।
क्लवका सचिव करण थापाका अनुसार प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद १ लाख रुपैयाँ, सिर्जना कप, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । द्धितिय हुनेलाई ५० हजार रुपैयाा, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । प्रतियोगिताको सेमिफाईनलमा प्रवेश गर्ने २ टिमलाई नगद ६÷६ हजार रुपैयाँ र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने उहाँको भनाई छ । उत्कष्ट खेलाडी र सर्वाधिक गोलकर्तालाई नगद ३ हजार, कप, मेडल र प्रमाण पत्र प्रदान गरिने आयोजक सिर्जना युवा क्लवले जनाएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा मंगलबार विहान भुलभुले सुरुङ मार्गदेखि ठूलीबेंसीसम्मको ८ किलोमिटरको मिनि म्याराथुन प्रतियोगिता गरिएको थियोे । प्रतियोगितामा साजन तामाङ प्रथम, सन्तोष घले द्धितीय, कुशल पंगेनी तृतीय र सुजन अधिकारी शान्त्वना भएका छन् । प्रतियोगितामा २१ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
पुस ३० गते झाक्री प्रदर्शनको कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन बेलुका लोक संस्कृतिको संरक्षण गर्दै लोक दोहोरी प्रतियोगिता गरिने क्लबले जनाएको छ । प्रतियोगितामा पहिलो हुनेलाई १५ हजार रुपियाँ र प्रमाणपत्र, दोस्रो हुनेलाई १० हजार रुपियाँ र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । माघ १ गते खुल्ला ठेलो प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने छ । प्रतियोगितामा पहिलो हुनेलाई ५ हजार रुपियाँ, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । द्धितीय हुनेलाई ३ हजार रुपियाँ, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने सचिव थापाले बताउनुभयो । तृतीय हुनेलाई २ हजार रुपियाा, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । टोल स्तरिय डोरी तान्ने प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई ५ हजार रुपियाँ, द्धितीय हुनेलाई ३ हजार रुपियाँ प्रदान गरिने छ । खेलुकद, साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै विद्यार्थीको प्रतिभा उजागरका लागि कक्षा ७, ८ र ९ का विद्यार्थीका बीचमा माघ २ गते हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । प्रतियोगितामा पहिलो हुनेलाई ५ हजार रुपियाँ र प्रमाणपत्र, द्धितीय हुनेलाई ३ हजार रुपियाँ र प्रमाणपत्र, तृतीय हुनेलाई २ हजार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । प्रतियोगितामा मस्र्याङदी गाउँपालिकाभित्रका विद्यालय सहभागि हुने पाउने छन् । माघ ४ गते पुरस्कार वितरण र माघ ५ गते चियापान तथा सरसफाई कार्यक्रम हुने क्लबले जनाएको छ । -चौतारी लाईभ
एपिएफले जित्यो, प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि
“दोश्रो शहीद प्रतिमा स्मृति” पुरुष भलिबल प्रतियोगिता किम्ताङमा माघ १४...